Indonesia in Focus: Dabeyl, abaaraha ku dhuftay Asia, Cadaab ama calaamadaha apocalypse?
Dabeyl, abaaraha ku dhuftay Asia, Cadaab ama calaamadaha apocalypse?
Kortaan ayaa la ma uusan dhammayn (366)
(Qaybta saddex boqol iyo lix iyo lixdan), Depok, West Java, Indonnesia, September 8, 2015, 19:19 pm).
Hadda dabeylo ku dhuftay inta badan dalalka Bariga Dhexe, ay ku dhinteen lix qof, xitaa magaalada of Mecca sidoo kale roob culus oo ay la socdaan onkod, abaaraha iyo daadadka ayaa sidoo kale Asia iyo sidoo kale Indonesia.
Haddii tani ay tahay ciqaab ama digniin ah dadka in dadka intooda badan ay illoobay in dhammaan dhacdo dabeeci ah, waxaa lagu wadaa (sunatullah), si ay dadku isu menginstropeksikan inay mar dambe sii wadaan in ay sameeyaan caddaalad darro, ay ku dhinteen kale, awood kasta oo dhaqaale iyo siyaasadeed ee u hunguri weyn, ama joogto ah samayn shirk (-hawlgalayaasha wadaajiseen Eebe).
Ilaahay wuxuu ka digayaa in ay jiraan quruumaha in hore inkastoo technology sare, hodan (isagoo guri oo gurigii badan raaxada) iyo wax badan oo ka mid ah xoolo, laakiin sababtoo ah zholim ay cadaab samaynayaan iyaga oo tirtira la daad, dhulgariir ama ifafaale kale ee dabiiciga ah waxay sababi.
Dabeylo ku jiifsankaraa Middle East, daraasiin jiifka isbitaalka, lix dhintay
(BBC) - Views magaalada Homs ee dalka Syria ay saameeyeen dabeylo.
Duufaanka Sand ku dhuftay gobolka galbeed ee Bariga Dhexe, taasoo keenaysa saraakiisha daraasiin dad ah ayaa cusbitaalka iyo dhiiri soo saartay digniin caafimaad.
Duufaanka ayaa ku dhacay meelo ka mid ah ee Suuriya ayaa Isniintii (07/09), oo saaka Talaadadii (08/09) faafidda in dalal kale oo dhawr.
Inta badan Lubnaan, Israa'iil, Turkey, iyo Cyprus ay saameeyeen dabeylo ciid kuwan.
Wakaalada wararka ee rasmiga ah ee Lubnaan ee ka naadi qof dumar ah oo ku yaala waqooyiga Lubnaan ku dhintay ugu yaraan 80 qof ayaa cusbitaalka ay sabab u tahay dhibaatooyin ka haysta neefsashada.
Sababtoo ah duufaanka this deegaanka Wasaaradda Israeli sidoo kale ka codsadey carruurta, haweenka uurka leh iyo dadka waayeelka ah in ay guriga joogaan.
Media ee Suuriya, halka uu ku leeyahay sababta oo ah duufaanka, dagaal gobolka Idlib oo Hama hakad.
Wargeyska Taabacsan dawladda kumeel-Suuriya, al-Watan, ayaa sheegay in dabeylo sameeyo mamnuucayo helicopters military oo ay leedahay dowladda in ay duusho.
Cimilada xun waxaa qayb ahaan ay sababeen nidaamka cadaadis hoose ee gobolka oo dhan iyo cammuudda la afuufi ka bari, ee SANA rasmi ah wakaalada wararka.
Sida laga soo xigtay SANA, aragti saboolka ah ay sii socon doonaan maalmaha soo socda.
Xilli-roobaadka oo dabeylo kulaylaha keeney fatahaado ballaaran meelo ka mid ah koonfurta bari ee Eeshiya, halka kululaaneysa ee Pacific ee kulaylaha bandhig abaar daran ee bari, saynisyahano u sheegay.
Waxayna dhihi laba cimilada kala duwan yahay guud ahaan dabiici ah, laakiin inta arintan laga sii kordhay sababtoo ah adduunka kulaalaya oo digniin u muuqataa in xaaladan xad-dhaaf ah ka sii dari karo mustaqbalka.
Myanmar, meelaha qaar la kulma roobab iyo daadad maalmihii la soo dhaafay Vietnam iyo Thailand, la mid ah sida West Bengal, Hindiya.
Isla mar ahaantaa, inta badan qaybaha waqooyi ee Indonesia iyo Thailand soo maray abaar daran.
Culumada saynisku waxay dhihi tiro ka mid ah isbedel ku Equatorial Pacific Ocean ee saameyn ku yeelan xaaladaha cimilada ee qaybta bari ee koonfur bari Asia.
Xilli-roobaadka koonfurta galbeed ee badda Carabta badan sare ee Badweynta Hindiya, sidaas hoos roobabka ee South Asia iyo qaybo ka mid ah koonfurta bari ee Eeshiya.
El Nino ee Indonesia
"In la xiriirta abaarta ka jirta Indonesia iyo meelo ka mid ah koonfurta bari ee Eeshiya, gaar ahaan la xidhiidha El Nino oo la filayaa in ay sii wadaan fursadaha ilaa 2015 ka dib"
Khubaro Saadaasha Hawada ayaa sheegay in gobolka qalalan ee Indonesia ayaa muddo dheer la filayay sababta oo ah waxa loo yaqaano El Nino - kulaalaya heerkulka dusha badda ee Pacific ee kulaylaha.
"Waxaan guuleeysteen dhihi karaa waxa ku dhacay ee la xiriirta abaarta ka jirta Indonesia iyo meelo ka mid ah koonfurta bari ee Eeshiya, gaar ahaan la xidhiidha El Nino oo la filayaa in ay sii wadaan fursadaha ilaa 2015 ka dib," ayuu yiri Cumar Baddur, meteorologist ee Ururka Caalamiga ee Saadaasha.
Qubarada tidhaahdo inta Nino El dhaco, biyaha kulul ee waqooyi-galbeed Pacific u dhaqaaqo bari, si ay gobolka soo maray qabow oo biyo ah.
"Biyaha qabow soo xaaladaha ka qalleyl in qaybta bari ee koonfur bari Asia - sida hadda dhacaya - in la barbardhigo biyaha kulul uumi kara oo keeni kara roob," ayuu yiri Edvin Aldrian of Agency ee Qiimaynta iyo Codsiga of Technology (BPPT).
El Nino ayaa sidoo kale u dhiibay saadiyayaasha digniin saadaaliyo roobabka monsoon Indian hooseeyaan sida caadiga ah ee July iyo August.
In ka badan toban dalalka of India roobab ah xilli-roobaadka waa la waayayaa, ayuu yidhi Saadaasha Hawada Waaxda Indian.
Roob culus oo soo kordhayay
"Waxaan sidoo kale ka filayaan hoos u dhaca roobabka yar, sannadkan waxaa la filayaa sano El Nino," ayuu yiri Tun Lwin, hogaamiyihii hore ee wakaalada saadaalinta hawada ee Myanmar.
"Laakiin xoogga xilli-roobaadka hadda waa ka sii xoog.
"Markii hore waxaan helay roobab sare, ay sabab u tahay xilli-roobaadka in ay u guurayaan si ay u waqooyiga ee cagta ee Himalayas ka dibna daruuro monsoon ku bilaabaan in ay ka guuraan qaybta sare ee koonfurta."
Meteorologist in Myanmar ayaa sheegay in dalka uu helo roobab heerar gaar ah, ayaa sababy fatahaado oo ay ku dhinteen in ka badan 80 qof oo ku dhowaad 250 kun oo qof ay ku barokaceen tagay.
Roob Daruur monsoon oo Typhoon Comments waxaa sidoo kale ku dhintay in ka badan 100 oo qof oo sababay dhaawaca ee West Bengal, Hindiya.
Lwin ayaa sheegay in arrin ugu weyn in ay xoojisaa xilli-roobaadka waa duufaanta kulaylaha ah.
Culumada saynisku waxay dhihi El Nino sida caadiga ah u jilciyaa xilli-roobaadka, laakiin hadda waxaa si dhab ah xoojisaa duufaanta kulaylaha.
Daadadka iyo abaaruhu ku taal koonfur bari ee wakhtigan inta badan waafaqsan ay kala duwanaanshaha dabiiciga ah, halka laga kordhinayo xoogga.
Taas macnaheedu waxa weeye in la kordhiyo xoogga cimilada xad dhaaf ah, waxay dhihi, waxaa sabab u ah in la kordhiyo heerkulka ee dhulka.
"Kulaylka ee jawiga iyo badaha ka goor siiyaan tamar dheeraad ah yihiin xaalado adag, sidaasna ay ku kordhiyaan ay xoogga," ayuu yiri Baddur.
Qubarada digo kordhinta hawada ee gaasas lagu koriyo, sida dioxide kaarboon, kulaylka dabin in jawiga, iyo kulka Badda sababa isbadalka cimilada aduunka.
"Ma dhihi karo waxa ka dhacaya koonfur bari Asia waa saamayn toos ah isbeddelka cimilada, laakiin waxaan dhihi karaa isbedelka cimilada kordhin doonaa xaaladaha xad-dhaaf ah oo kale ah."
In badan oo xad dhaaf ah
"Haddii aad eegto diiwaanka tan iyo 1950, waxaa la qaadan xoog iyo index ayaa muujinaysa sanadkan noqon doonaa xoogga, ilaa iyo haatan"
Saraakiisha Saadaasha Hawada ee Indonesia ayaa sheegaya in xaaladda El Nino waxa la siiyaa xoog.
"Haddii aad eegto diiwaanka tan iyo 1950, waxaa la qaadan xoog iyo index ayaa muujinaysa sanadkan noqon doonaa xoogga, ilaa hadda," ayuu yiri metereolog Indonesia, Edvin Aldrian.
Hay'adda Qaramada Midoobay oo warbixin noqday sal u ah wadahadal cimilada adduunka, Panel goboleedka ee Isbaddalka Cimilada (IPCC), ayaa ka digay xaalado adag sida roobab culus oo muddo gaaban iyo abaarta.
"In koonfur bari Asia, maalin roob-qooyay guud ee sannadka kor u kacay tobankii sano halkii 22mm, halka roobab maalintii korodhka roobaadka xad dhaaf ah 10mm per toban sano," warbixintii ugu dambaysay IPCC.
"Laakiin duwanaanta iyo cimilada uu yahay rabitaanka aad u kala duwan ee gobolka oo xilli ciyaareedkan," ayuu hadalkiisa raaciyay warbixinta.
Tatang horay 25 sano sida beeraley ku nool Indramayu, West Java, oo uu si joogta ah soo maray abaar, laakiin abaarta ee sanadkan ayaa ahaa ka khatarsan yahay sanadihii hore.
"Sanadkii la soo dhaafay, waxa uu ahaa mid Rabbiga Rabbigu beeraha beeralayda. Laakiin xilli ciyaareedka hadda ka daran yihiin sano ee la soo dhaafay," ayuu yiri Tatang.
Abaaraha ee Indramayu, West Java, laakiin sidoo kale in 11 gobollada kale ee Indonesia ma aha oo kaliya.
Qiyaastii 25,000 oo hektar oo dhulka beeraha waa qalalan iyo malaayiin muwaadiniinta Indonesia ayaa la filayaa inay dareemaan saamaynta ay, sida la'aanta ah ee biyaha u daboolaan baahiyahooda maalinlaha.
Si ay waajahaan abaar, oo ah afhayeenka Hay'adda Qaranka ee Maaraynta Musiibooyinka Sutopo Purwo Nugroho sharxayaa tallaabooyinka in la qaado dowladda.
"Qaybinta, droping biyo-biyo ah oo isticmaalaya biyo markab. Markaas buuxi haamo biyaha lagu keydiyo oo biyo ah, dayactirka tuubooyinka ah, iyo wixii la mid ah," ayuu yiri Sutopo.
Intaa waxaa dheer, dawladda ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay qorshayaal si loo dhiso 49 berkadood Indonesia oo dhan, cad Sutopo.
Wadar ah 12 gobolladiisa ee Indonesia waxaa ku dhacay abaarta
Ma aha in ku beeri
Meelaha qaarkood ee Indonesia si dabiici ah iyo juquraafi Waa in uu yahay mid qalalan, sida Wonogiri, Boyolali iyo Blora.
Laakiin iyadoo arrin caalamka El Nino, Badweynta Pacific khaldama heerkulka dusha, waxaa saameynaya dalal kala duwan oo ku yaalla gobollada Equatorial. Taasina waxay keentaa in abaarta ee Indonesia siyaado.
Sidaa darteed, Thomas Jamaluddin, oo ah madaxa Machadka Qaranka ee Aeronautics iyo Space talinayaa beeralayda aan menamam bariiska ee xilli ciyaareedkan.
"Management in ay dhacdo beeraha waa in ay sidoo kale tixgeliyaan helitaanka biyaha. Meelo badan oo ka mid ah beeralayda cusub koraan bariis, laakiin markaas abaaraha ku dhuftay," ayuu yiri Thomas.
Intaa waxaa dheer, Thomas ayaa sidoo kale ka codsaday dadka codsanaya maamulka biyaha iyo dukaan badan marka biyaha laga gooynayaa.
Waxaa lagu qiyaasaa in abaarta ay sii wadi doonto in ay sanadkan ka dhacay Indonesia ilaa November.
Tafsir Al Mu'min Aayadda 67-85
Aayaadka 67-68: Martiqaadka ah in dadka si ay fiiro gaar ah u xoogga Eebe wa Subhaanahu Allaah ee abuurka iyo horumarinta noloshooda, oo si dhaqso ah u dalbato amarka Ilaah Subhaanahu wa Allaah.
Tarjamada Surah Al Mu'min Aayadda 67-68
67.  kan idinka abuuray dhulka , ka dibna dhibic ka mid ah manida , haddana Calaqo ah, ka dibna aad ku dhalatay sida ilmaha, ka dibna laguu ogol yahay inaad gudbaan , ka dibna duugoobaynin. Laakiin idinku dhex jiro waxaa lagu demiyo ka hor. (Waxaan sidaas la sameeyo) in aad hesho si aad waqtiga ku cad  ka, si aad u  fahmaan.
68. Waxa uu ahaa mid ka mid ah oo ku saabsan iyo dami . Sidaas kolkuu ku dhowaa si ay u dejiyaan arrimaha wax , wuxuu uun bekata isagii ku yidhi, "Noqo!" Markaas wax noqdaan waxa .
Aayaadka 69-78: noqotay cidhibtii kuwii ka soo horjeeda aayaadka Eebe iyo Rasuulkiisa, oo amarka Eebe Subhaanahu wa Allaah in Rasuulkiisa inuu samir iyo sugto burburinta gaalada.
Tarjamada Surah Al Mu'min Aayadda 69-78
69. Ka warran dadka kuwaas oo mar walba diidayeen Aayaadka Eebe ? Sida ay la eelin karin ?
70. (kuwaasu waxay) Kuwa ka Gaaloobi Kitaabka (Quraanka) iyo waxyiga u keeneen by ulatimid mid aan ku diray. Later waxay ogaan doonaan,
71. marka Xadhkihii iyo silsilado kaalinta hareeraha ay Luqunta , sidii ay jiido,
72. galay biyo aad u kulul, ka dibna waxay la dab ku gubay,
73. markaas ku yidhi  in, "Waa kuwee sanamyada oo aad la wadaajin jirray ,
74 (waxaad Caabudaysaan) Eebe ka soo hadhay? "Waxay ku jawaabay," Waxa ay naga tageen, xataa aan marnaba ayaa caabudi wax . "Saasuuna Eebe udhumiyaa Gaalada ogolaanaysaa tago .
75.  Taas  waxaa ugu wacan in aad ku Farxa dhulka oo aan la eegin xaq iyo sababtoo ah waxaad had iyo jeer ku Farxa (caasinimo) .
76. (Waxaa lagu wuxuu iyagii ku yidhi): "gala albaabada Jahannamo , iyo in ay dhex degganuna taas way Sidaas taasi ugu xumaa ee meelaha loogu talagalay dadka is kibriya .."
77. Sidaas baad ahaan bukaanka (Nabiyow) , yabooha Eebana waa Xaq. Inkastoo aan ciqaabta ugu Waxaan ancamkan iyaga, haddii kalese waxaad naxariistanada (geerida horteeda iyaga ku soo kor) idin tusin, laakiin iyaga waa ku noqonno.
78.  dhab, waxaan u Bixinnay Rasuullo kaa (Nabiyow)  ka hor diray, waxaa ka mid ah in aan kuu sheego, oo iyaga waxaa ka mid ah (sidoo kale) ma aha waxaan kuu sheegi. Ma jiro mid ka mid ah rasuulladii soo mucjiso ah, haddii aan idanka Eebe . Sidaas markuu u yimid amarkii Eebe uu , (kiisaska oo dhan) waxaa go'aan ka cadaalad . Oo markii ay  dad nasiib daro kuwa ugu cuslaataan wax aan waxba tarayn .
Aayaadka 79-85: sharciyada aan la bedelay, casharada in loo qeybin karaa dhacdooyinka Dadkii hore, iyo iimaanka in wakhtiga cadaab yimid aan waxtar lahayn.
Tarjamada Surah Al Mu'min Aayadda 79-85
79.  Eebe waa kan idiin yeelay Nicmoolayda, inta badan oo idinka mid ah kortaan iyo qaar ka mid ah waa inaad ku cuntaan.
80. Oo aad (mar dambe) faa'iidooyinka kale ee isaga (waa xoolaha) iyo in aad loo gaaro ujeedo (goal) kaydiyaa qalbigaaga (la driving) . Iyo xayawaanka baabuur wadista, oo ay gaadiid saaran.
81. Wuxuuna tusiyeen calaamdaha (xooggiisa) aad  in. Markaasaa calaamadaha (xoogga) Eebe wixii aad diidi ?
82.  Miyayna ku soconin dhulka oo markaas ogaaday  sida cidhibtii kuwii ka horreeyey gaaladii Makaad . Waxay ahaayeen xoog badan oo daran iyo (more) Mala'igtu ilbaxnimo dhulka , ma waxay kasban markaas iyaga  caawin kara.
83.  Sidaa darteed markii rasuulladii waxay ula timid caddeyn dhabta , oo ay ku faraxsan tahay in ay aqoon jira  ay yihiin iyo waxa ay ku hareereysan (Cadaab) waxay ku jees jeesi ku majaajiloodaan.
84. Sidaas markay arkaan cadaabkanaga waxay , "Waxaan aaminsanahay kaliya in Eebe kaliya, waana diidnay waxaan nahay in la wadaajisaan Eebe  ilaahyadii."
85. Markaas ay Iimaan markay arkeen cadaabka naga mid ah ma sii waxtar leh iyaga. Taasina waa sunnada (xeerarka) Eebe ayaa run addoomadiisa, . Iyo marka la gaalo nasiib darro .
 dheeraad ah uu sii adkaynayo ay dhacdo tawxiid, adigoo sheegaya in uu waa abuuraha, oo kuweeda abuurka ah ee dhacdooyinka aad leedahay. Sidaa darteed kan idinka Abuuray, sidaas oo keliya caabud.
 Taasi micnaheedu waa in Aabayaalkiin Adam 'salaan alaihis dhulka la abuuro.
 Tani waa bilowgii geedi socodkan ka mid ah dhacdooyinka ka dambeeya ayaa ah Adam marka caloosha hooyadiis, in shahwada, ka dibna u noqon 'alaqah (xinjir), ka dibna wuxuu noqday mudhghah (buro oo jidh leh), ka dibna loo isticmaalo lafaha, iyo lafaha ayaa ku duudduubtay oo hilib doofaar ( arki Al ka Aamin: 14).
, taasina waa da'da marka dheeraad ah iyo xoog ka kaamilsan, da'da 30 ilaa 40 sano ah.
 Marka uu dhamaado da'daada.
 Dawladdu waxay idinka mid ah, si aad u ogaato in waxa aad la abuuro dhacdooyinka leeyihiin Mahasempurna xooggiisa, oo mana jiro mid uu xaq u leeyahay in la caabudo laakiin isaga.
 kan leedahay shid iyo off, si qof ma uu dhinteen labada sabab ama sabab la'aan idankiisa mooyee. Waxa uu sheegay in, "uma dheerayn nolosha a-jiray muddo dheer, mana hoos ay da ', laakiin (hore u dhismay) Kitaabka (Lawh Mahfuz). Sida runta ah waa u fududahay Eebe "(Trans Fatir:. 11).
 Big ama yar.
 No mid ahaa in iska caabin ah oo looga hortago in ay awoodaan.
, taasina waa si cad oo dhalaalaysa. Tani waa jumlad la yaab leh in loo qaato in ay gobolka saboolka ah.
 Taas waa sida ay ha ka leexdeen karaa Aayaadka Eebe waa mid cad? Oo weliba meesha kale ee ay lahayd ka dib markii sharaxaad fiican ka gudbi? Ma ka heli aayaddani cad sida soo horjeeda aayaadka Eebe? No, Ilaah, iyagu ma ay helin. Ama in ay ka heleen qaar ka mid shaki ku jiro in line Hawadooda, ka dibna ay u isticmaalaan si ay u weeraraan aayaadka shaki Eebe si ay u difaacaan ay wefdii? Iyaga sarrifka aad u xun iyo fursadaha ay doortaan gooni Beeniyey kitaabkii u yimid xagga Eebe soo bixiyey rasuullo, markii uu meesha ay joogaan maskaxda ugu aadanaha oo ugu saxda ah iyo ugu sharaf leh. Ajir Waxay Jahannamo sifeeyey xubinta qoraalka ee soo socda.
 oo sidaas daraaddeed ma ay ugu gudbaan.
 Inkastoo adag u dhaleeceeyay.
 Taas waa in ay ku siin karaan faa'iidooyinka iyo fogaado inta badan cadaab?
 in ay diidaan in ay caabuda, iyo sanamyadii la soo bandhigay, ka dibna Eebe wa Subhaanahu Allaah yiri, "aad xaqiiqada iyo waxaad Caabudaysaan oo Eebe ka soo hadhay, waa sed Jahannamo, waa in aad u tagto u galay." (Trans. Al Anbiya: 98)
Sida laga soo xigtay Shaikh Sida Sa'diy, kolba tani micnaheedu noqon karaa in ka badan-xoog opinion in ay ula jeeddaan erayadaas waa in ay aqoonsadaan batilnya Caabudaysay oo Eebe ka caabudi waa, iyo in Eebe waxay leedahay hay'ado lahayn. Waxay yihiin maleegey iyo been cibaadada, xitaa caabudo oo aan xaq u leeyihiin in la caabudo. Tani waxaa ka muuqata hadalka Eebe adkaade, "Oo Ilaah wuxuu kuu ogolaanayaa tago udhumiyaa Gaalada."
 kuwaasu waxay sida baadida in ay qabtaan dunida, khaa'imiin waa cad yahay in qof kasta si ay u aqoonsadaan, xumaatooyinkayagii Maalinta Qiyaame, iyo waa run hadalka Eebe imtithaal, "Waana kuwa ugu baaqay sokeeye Eebe ka sokow, ma aha raaca (aaminsan a). Waxay ahayn ma aha nacayb Diintooda raacaan, oo ay waxaan male ahayna "(Trans Yunus:. 66) waxaa sidoo kale lagu muujiyey hadalka Eebe imtithaal,". Oo yaa ka baadi badan kuwa ilaahyo kale caabuddaan oo Eebe ka soo ma aha ogolaan karo (salaadda) ilaa iyada oo ay la dayacay oo ka mid ah (fiiro) Qiyaamaha salaaddana way ILaalin "? (trans Al Ahqaaf:. 5)
 Waxaa kale oo uu sheegay in dadka cadaabta.
 Taas waxaa Kumaan cadaab.
 Taasina waa waxaad ugu farxi jirteen Xumaanta iyo sharaf weyn lehna been in aad qaban iyo aqoon ah in sayniska menyelisihi rasuullada iyo Isla Sarreeyn aad addoomada Eebe ku Jawr falo iyo jaha-sida erayga imtithaal in dhamaadka cutubkan, "Sidaas darteed, markii ay Rasuullo ula yimaadeen caddayn dhabta ah, ay ku faraxsan tahay in ay aqoon jira waa "(trans Al-Mu'min:. 83) sidii erayga imtithaal on Qaaruun,". Ha aad u kibray, Eebe ma Jeela kuwa aad ku faano "(trans Qaaruun:. 76). Ku raaxeyso sida axkaamta ku faraxsan yahay taas oo u baahan in Cadaab, ee ka duwan ku faraxdaan ammaan ku reyreeya aqoonta iyo shuqullo wanaagsan oo waxtar leh, sida hadalka Eebe, ee adkaada, "Waxaad dhahdaa," By fadliga Eebe ee korkiina iyo naxariistiisa, ha la farxaan hadiyaddii Ilaah iyo Naxariistiisa yaa ka khayr roon waxa idiinka Khayrbadan waxay Kulmin "(trans Yunus:. 58)...
 Mid kasta oo ka layers waxay tahay in hay'ad samafal oo la raacayo.
 Meeshii in ay dullowganaga iyo ceebeeyo, xabsi iyo jirdil iyo talantaalli dareento kuleyl aad u sareeya iyo qabow waa heer sare ah.
 In ka wacdiyey damacsan tahay inaad dadkaaga, oo carqalad ku ah ee ay dhadhan. Si aad noqon kartaa bukaanka, waxay u badan tahay waxay aaminsan yihiin in yabooha Eebe Xaq yahay. Waxa uu kaa caawin doonaa Diinta, kor u xukunkiisa, iyo caawinta Rasuulladiisa. Sidoo kale, si aad noqon kartaa bukaanka, markaas aad xusuusataan in Cadaab u cadaawayaashiinna dhici doona, haddii aan dunida oo dhan, ka dibna ku soo socda, tan iyo markii ay ku soo noqdaan Ilaah, ka dibna iyaga sida ay waxa ay samayn Eebe u abaal mariyo. Allaah Subhaanahu wa Eebe yidhi, "Oo ma waxaad weligood (Nabiyow) u malayn in Eebe halmaansanyahay waxay fali waxaa loo sameeyaa by kuwa dulmi falay. Dhab ahaan yaa Eebe Ajashoodu iyagii, ilaa maalinta indhaha indhaha (camalka) yaa u xoojiyaan dagaalka, "(. Trans Ibrahim: 42)
 Markaas Eebe wa Subhaanahu Allaah iyahoo isaga iyo menyabarkannya ay walaalihii ku doonayo xusuusinaya ka ah rasuullada dhexdooda.
 ayaa ku wacdiyi jiray dadka, oo waxay ahaayeen bukaanka oo uu dadka xanuunada.
 Tan waa addoommadii ee go'an. Sidaa soo jeedinta in la rasuulladii si ay u soo baaragaraafka (Mucjiso a) sida ay rabto ka dib markii Eebe Aayaadkiisa muujinaya in runta ah Rasuuladiisa ahayd soo jeedinta ah in uu yahay dulmi iyo culaab is.
 Si rasuulladii iyo cadaawayaashooda ka mid xukumi.
 Taas oo u dhiganta in ay meel iyo si waafaqsan runta, in rasuulladii iyo kuwa raacsan badbaadinta iyo baabbi'in Kuwa ka Gaaloobi.
 Markii la siin go'aan.
 nooca ay tahay wax shar ah, sayniska iyo hay'ad samafal oo kac oo iyaga ka jira wax aan waxba tarayn, oo Ujeedadu sidoo kale waa wax aan waxba tarayn. Sidaa darteed, waa in ay ka hadlay aayaddani waxa ay ka walwasho haddii ay si joogto ah ay been, ka dibna waxay lumin doonaan sida jiilka ka hor ayaa khasaare, sababta oo ah ma haystaan wax naxariis badan oo waxaa jira ma lahan amaan cadaabka buugaag hore.
 Eebe wa Subhaanahu Allaah siiyo Nicmada addoomadiisa, si ay u sameeyaan in ay xoolahoodii oo ay xujeesan, farxi kala duwan, ay ka mid yihiin faa'iidooyinka ku jira fuushan, faa'iidooyinka cunidda hilibka, caanaha, jirka oo Kulaashaan la maqaarka, oo waxaad ka samaysaa qalabka kala duwan ee maqaar, dhogorta iyo timaha.
 Taas waa illaa dal fog dareen farxad iyo farxad.
 ayaa muujinaya uu midnimada, magacyada iyo dabeecadda. Tan waxaa ka mid Nicmada ugu weyn, halkaas oo uu addoommadiisii tusay aayaadka uu, labada naftooda iyo jid toosan, waxayna ugu baaqaysaa Nicmada uu si ay u ogaadaan isaga, isaga mahad iyo in la xusuusiyo uu.
 Taas waa aayadda oo ka mid ah aayaadka in aanad garan, sababta oo ah waxa ay weli tahay inaad qalbigiinna oo dhan aayaadkiisa iyo Nicmada Eebe Xaggiisa ka ahaatay, si ay jirto meel ay ku diidi iyo meel ay u noqdaan, xitaa waxay u baahan tahay qof macquul ah oo aad ku isticmaali daacadda in ay ku dadaalaan in ay yeelaan, isagayna u khushuucaan oo naftiisa u qurxiyay la caabudo isaga.
 Eebe wa Subhaanahu Allaah yeedhi kuwa beeniya rasuul in ay u safraan dhulka midkood la wadnaha iyo jirka iyo sidoo kale dadka yaqaan weydiiso.
 Inkastoo fekerayo, ma ahan oo keliya in ay arkaan Laakiin qalbigoodu waa kusugan.
 dadyowga ku qorani, sida Caad, Thamuud, iyo kuwa kale, halkaas oo ay ku xoog weyn iyo hanti badan oo dhaxalgal dheeraad ah.
 Sida dhismaha, qalabka, oo buurta iyo daaraheeda waaweyn.
 Marka ay timaado in aad amarradayda kuwa (inuu ku ciqaabo). Markuu ciidankii iyagu ma ay muhiim tahay, iyagu ma ay awoodaan in ay ka sameeyaan ilaa la Xoolahooda iyo aadan awoodin inaad ku dhuumato ka dambeeya ay qalcaddayda.
 markaas Eebe ku sheegay in ay qalad weyn.
 Taas waa buugaagta jannada, mucjisooyin, aqoon waxtar leh oo qeexaya user halkii ay khaa'imiin, xuquuqda wax aan waxba tarayn ka.
 waxay ahaayeen faraxsanahay aqoonta korkooda saaran macnaheedu waa in ay ku filan la sayniska korkooda saaran oo ma dareemaan baahida loo qabo in mar dambe in saynis lagu baro rasuulladii iyaga ka mid ah, xitaa ay garan dhumucda iyo matalaad ah Macluumaad keenay oo rasuulladii. Durba waxaa lagula talinayaa, ugu faraxsan yahay in ay muujiyeen daacad u ansixiyo Eebe berpegangnya ay runta isaga iyo rasuulladii ayaa u keenay. Mid tusaale ah ee sayniska in aadanuhu ay yihiin inta badan ku faano isaga waa sayniska ee falsafada iyo sayniska Mantiq Greece, halkaas oo aqoon in ay ku dooday Aayado badan oo ka mid ah Quraanka, yaraynta ay ammaan tahay qalbiga aadanaha, oo waxaad ka samaysaa dood ah in dhaadhiciyay iyo qath'i (hubaal) sida doodaha lafzhi in ma ay dhali kalsoonida ugu yar, inay waantoobaan dadka sabab doqon iyo wax aan waxba tarayn halkii doodaha. Waxaa ka mid ah dabeecadaha Qallooc Aayaadka Eebe oo ka dhan ah waxaa, musta'aan wallahul.
 Ka mid ah aqoonsi, laakiin marka la aqoonsado in mar dambe waa mid waxtar leh.
 Labada Sidaana iyo sanamyadiisii, oo annaga qudhayadu fogeeyey wax kasta oo menyelisihi rasuulladii, labada qaab ee sayniska iyo hay'ad samafal.
 iimaanka Taasi ma aha mid waxtar leh marka cadaab yimid. Taasi maxaa yeelay, rumaysadkiinnu waa iimaanka lagamamaarmaan iyo waaqiciga ayaa goob joog, laakiin iimaanka waa mid waxtar leh oo keliya marka ay maqan, in uu yahay, ka hor inta ay jiraan calaamadaha cadaab.
 Taas cad yahay khasaaraha ay qof walba. Halka ka hor in ay had iyo jeer lumin.
Aqoonta MAALINTA MAALINTII UGU DAMBAYSAY
Aqoon ku saabsan Maalinta Qiyaame ah waana arrin la mid ah ku maqan oo la og yahay oo kaliya in ay imtithaal, sida ay waxa muujiyay Aayado badan oo al-Quraanka iyo axaadiista Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii sababtoo ah aqoon ku saabsan Maalinta Qiyaame waa kiis kaliya ee loo yaqaan Eebe Ilaaha Qaadirka ah. Ma uu tuso Malag mana juxtaposed in Nabiga ah oo loo soo diray . Qofna ma garanayo markii Gaalku marka laga reebo imtithaal.
Nebigu sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii inta badan ka hadlo gobolka Qiyaamaha iyo qatarta, ka dibna si warsadeen Qoomkiisu inuu markii Qiyaamaha ah. Waxa uu sheegay in ay tahay arrin ka maqan oo loo yaqaan Ilaaha keligiis ah, iyo sidoo kale Aayaadka Quraanka sharxayaa aqoon ku saabsan in markii Qiyaamada waa wax Ilaah ku hayaa xaggiisa.
"Waxay ku warsan Qiyaamaha, 'Marka tani ka dhacdey?" Waxaad dhahdaa, "Eebe agtiisuu yahay ogaanshaha Qiyaame in uu yahay dhinaca Eebahay; qofna sharixi karaa wakhtiga imaanshaha uu isaga. Qiyaamaha ahaa mid aad u culus (rabshad uun) ku sugan Samooyinka iyo Dhulka. Gaalku Qiyaamada idiinma iman doono, laakiin si lama filaan ah. "Waxay ku weydiin sida haddii aad si dhab ah u ogaadaan. Waxaad dhahdaa, ". Runtii aqoonta Maalinta Qiyaame waa Eebe, laakiin dadka badankiisu ma oga '" [Al-xumihiinna: 187]
Allaah amray Nabiga, Sallallaahu Muhammad 'Laahu calayhi wa calaa aalihii si ah inay u naadiso Dadka aqoonta in Qiyaame yahay oo kaliya in Eebe kaliya, kaliya waxa uu ahaa mid ka mid ah oo si cad u og yahay dhibaatada iyo markii ay dhacday, mid ka mid ahaa dadkii degganaa samooyinka iyo Dhulka ku Sugan.
Sida shaaca ka qaaday xagga Ilaah,
"Dadka ku warsan maalinta Qiyaame. Waxaad dhahdaa, "Eebe agtiisuu yahay ogaanshaha Saacadda wuxu uun jiraa Eebe. 'Iyo ma taqaanaa (Nabiyow), waxaa laga yaabaa in Maalinta Qiyaame waa dhow waqtiga" [Al-Ahzaab: 63].
Sidoo kale hadlay Ilaah;
"(Gaaloobay) waxaad weydiisan (Nabiyow) oo ka mid ah Maalinta Qiyaame, marka waa ay dhici doontaa? Kan idin geeyo (jidkiina) lagu xusay karaan (waqti) tahay? . Rabb ee aad soo Celinay dhamaadka (bixinta markii ugu) "[An-Naazi'aat: 42-44]
Markaas dulucdii aqoonta Maalinta Qiyaame oo ay Ilaah u soo noqdaan oo keliya.
Sidaas darteed, markii Gabriel Alaihissallam weydiiyay Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii Maalinta Qiyaame-sida ku cad Xadiiska in muddo dheer Gabriel Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii yiri:
"Dadka ayaa la weydiiyey waxa ay ku saabsan uusan ka badan qofka la weydiiyay ogahay." 
Gabriel, ma aan ogayn marka Maalinta Qiyaame waxay ku dhacday, sidii buu yeelay Nabiga Sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii.
Sidoo kale, Nabiga 'Isa Alaihissallam, isagu garan maayo marka Qiyaame dhacaya, laakiinse isagu wuxuu tegi doonaa marka apocalypse way soo dhow dahay. Xitaa (hoos u dhaca Nabiga 'Isa) oo ay ku jiraan calaamadaha weyn ee Gaalku Qiyaamada, sida lagu sharxay doonaa.
Al-Imaam Axmed rahimahullah tebinaysa, iyo sidoo kale Ibn Majah iyo al-Hakim ee 'Abdullah bin Mascuud Radi anhu, ka Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii, ayuu yidhi:
"Habeenkii waxaan ku jiray-Isra'kan samada, Waxaan la kulmay Ibraahim, Muuse iyo Ciise." Waxa uu sheegay in, "Waxay isku yidhaahdeen ku saabsan kiiska Qiyaame, markaas ay soo celiyo ay kiiskooda u geeyaan Ibraahim, ka dibna wuxuu ku yidhi," Waxaan ma aqoon waxaa ka mid ah, ku soo laaban kiiska waa Muuse. 'Markaasuu wuxuu ku yidhi,' Waxaan ma aqoon ku saabsan, la siiyo dib kiiska in Ciise. "Ugu dambayn wuxuu ku yidhi, 'Sida marka ay dhacdo, markaas aan ninna aqoon, Eebe mooyee. Waxaa ka mid ah Aayaadka siiyey aan Rabbiga Qaadirka ahu igu yidhi, Runtii NNKH ka soo bixi doonaan. "Waxa uu sheegay," Oo waxaan u waday laba seefood. Haddii weyn wuxuu igu arko, oo uu ku dhalaali doonaan sida dhalaalayaa qasacad. "Waxa uu sheegay, markaas Eebe u baabbi'in. '" 
Iyo Imam Muslim Qisadii rahimahullah ee Jabir bin 'Abdillah anhuma Radi, ayuu yiri, "waxaan maqlay Nabiga sallallaahu' Laahu calayhi wa calaa aalihii kuwaas oo uu sheegay in muddo bil ah ka hor inta uusan dhiman ayuu:
Waad i weydiiyay Maalinta Qiyaame? Iyadoo sayniska waa uun dhinaca Ilaah, iyo waxaan ku dhaartey Magaca Eebe, ma jiro naf nool uu ku dhashay dhulka this in uu yahay nin boqol jir ah. '" 
Xadiiska Tani dhimi kara suurtogalnimada in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ogaan kadib markii Gabriel weydiiyaan.
Ibn Kathir rahimahullah yiri, "Nebigu wax qorayn waxna kaas oo hoggaamiya Rasuullada, oo ay dabooli -shalawat iyo salaanta Eebe korkiisa Nabiga kii fahmo ee nimco, Yeedhe toobadda, oo amiir u ahaa dagaalka, siinayo go'aanka, kaas oo sharaf martida, ururinaysa, halkaas oo dhan aadanuhu isagii u soo shiray (si loo helo syafa'at), taas oo uu sidoo kale sheegay in xadiiska dhab ah xadiiska anhuma Anas iyo Sahl bin Sacad Radi:
"Waxa uu ii soo cid direen oo Maalinta Qiyaame sida laba (farta) waa. '
Isagu waa u dhow jira farta murdisada iyo ka dib (farta dhexe). Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha uu, Ilaah baa isagii ku amartay in ay soo celiso sayniska ee Cadaabka isaga in haddii la weydiiyo ku saabsan, Eebe wuxuu leeyahay,
"... Waxaad dhahdaa," Eebe agtiisuu yahay ogaanshaha of Maalinta Qiyaame waa Eebe, laakiin dadka badankiisu ma oga. "[Al-xumihiinna: 187] 
Qof kasta oo qaba in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ogaato marka apocalypse, de markaas waa inuu nacas yahay, sababtoo ah Aayaadka al-Quraanka iyo axaadiista Nabiga ku xusan diido fikrado kuwan.
Ibn al-Qayyim rahimahullah yiri, "Waana kuwa sheeganaya in ay saynisyahano of our time ayaa shaaca ka qaaday been ah. Waxa uu ka dhigaa qancay (aqoon) aqoonta markii aan u siiyey isaga inay in Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ogaato marka Maalinta Qiyaame. "(Aad u qalmeen) wuxuu isagii ku yidhi," Nebigu sallallaahu' Laahu calayhi wa Salla ayaa mar sheegay in xadiiska Gabriel :
'Dadka ayaa la weydiiyey waxa ay ku saabsan uusan ka badan qofka la weydiiyay ogahay. "
Waa nacasnimo weyn, iyo macnaha xadgudubyada ugu daran. Nebigu sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii badan oo ku saabsan Ilaah wuxuu og, (aan habboonayn) oo uu u sheegay qof isagu waa ka fiirsaday sida negro ah, "aniga iyo aad u ogaato marka Qiyaame socday," kaliya nacasyadu wuxuu yiri, "Markii hore, waxa uu ogyahay in uu yahay Gabriel, "marka Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii daacad hadalkiisa, ayuu yidhi:
"Waxaa la ma uu soo ganaax noocan oo kale ah haddii waxaan isaga ahayn mid ogaa." 
"Waxa uu (Jibriil) ayaa ayana i gees u beddelay calalkiisii madaxa oo ku beegnaa this."
Markaasay iyana waxay u tageen inay eegaan tahay, laakiinse iyagu ma ay ha u hesho.
Nebigu sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii u ogaado inuu yahay Gabriel muddo ka dib, sida ku qoran by Cumar Radi anhuma, "Dabadeedna waxaan iska aamusay muddo dheer, ka dibna wuxuu ku yidhi,' O 'Umar! Ma taqaan oo si aad u weydiiso? '"
Kuwa iilaya macnaha leh, "wuu ogyahay in uu yahay Gabriel tan iyo markii uu isaga codsaday, halka uu ku aanan ku wacdiyin Ehelu waxaa ka mid ah marka laga reebo dib markii bareeg ah markii uu joogsadey!"
Markaas qowlka Xadiiska: (ما المسئول عنها بأعلم من السائل) waxaa ka mid ah qof kasta oo la weydiiyay oo weyddiiyeen, Haddaba qof kasta oo wax weyddiiyey oo wax laga weydiiyay xaaladda Qiyaamaha tani waa sida in (si isku mid ma oga). 
Sidoo kale, waxaa jira wax aan ku xusay calaamadihii iyo Ogaysiina waydiinayay horey u og yahay, in ka badan sidaa darteed marka uu ahaa ma laga weydiiyay calaamadaha.
Iyo in ka badan yaab badan dooddan waa waxa lagu soo dajiyey by as-Suyuti in al-Haawi ka dib markii wax jawaab ah daaha su'aalaha ku saabsan xadiis dadka ku dhex caan ah, "Runtii, Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ma sii joogi doono qabrigiisa kun sannadood? "Waxa uu (al-Suyuti) ayaa sheegay," Waxaan ka jawaabi in tani ay tahay been ah, waxaa jira aasaas lahayn oo dhan. "
Marka hore, xadiisyada ku jira ayaa tilmaamaya in dadkani ay sii gabowdid ka badan tahay kun Sano oo uqaadineed ma gaaraan shan boqol oo sannadood; sida Qisadii kala duwan oo adduunka ah in da'da waa toddoba kun oo sano, iyo Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii diray dhamaadka u ahaa kumanyaalka sanadka lixaad. 
Markaasuu ku xusan qaar ka mid ah xisaabinta in gabagabeeyo si fudud ma aha haddii uu mar ahaa shan iyo toban boqol oo sano. Markaas ayuu ka sheegay xadiisyada iyo atsar-atsar in qoqobyo isaga by:
Waxaa ka mid ah kuwaas waa Qisadii by Ath-Thabrani ee al-Kabiir ee ad-Dahhak bin Zummal az-Zuhani, ayuu yiri, "Waan riyooday, markaas waxaan idinku leeyahay Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii," ka dib waxa uu sheegay in xadiiska taas oo shaaca :
"Si kedis ah waxaan ku jiray ee (dhow) aad Rasuulkii Eebe, ee minbarka kaasoo jaranjarro toddoba tallaabo ah, oo aad ku sallaan ee ugu sarreeya," markaas ayuu ku yidhi, "taagnaa ayaa aad aragto leedahay todoba jaranjarada iyo waxaan ahaa on jaranjarada Kan ugu sarreeya, waxaa loola jeedaa in (da'da) adduunka toddoba kun oo sano, oo waxaan ku jiray kumanaan sanno ee u danbeysay. "
Waxa uu (al-Suyuti) ayaa sheegay in xadiiska Xadiiska ay al-Bayhaqi in ad-Dalaa-il, iyo sida-siiwata ayaa sheegay in xadiiska this dha'if sanadnya, laakiin xadiiska Qisadii by mauquf in Ibn 'Abbaas anhuma marayo wadada -path yihiin kuwo dhab ah, iyo Ath-Thabrani  menshahihkan aasaaska iyo waxa loo xoojin lahaa la atsar qaar ka mid ah.
Markaas as-Suyuti, in macnaha erayo Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii: ". ... Oo waxaan ku jiray kumanaan sanno ee u danbeysay" Ujeedadu waxay tahay in Muslimiinta ugu jiray kun toddobaad, si ay u dhigma taariikhda se-uu intaa ku daray in uu soo diray dhamaadka lix kun. Haddaan uu soo diray bilowga ah kun toddobaad, shaki la'aan calaamadaha Qiyaamaha sida waaweyn sida ka gees ah, hoos u dhaca Nabiga 'Isa, iyo qorrax ka soo baxna xagga galbeed ayaa la kulantay ka badan boqol sano waqtigeena ka hor, sababtoo ah Qiyaamada dhacay kunkii toddobaad, halka waxba ma dhicin wakhtigaas, ka dibna waxay muujinaysaa in inta ka dhiman sanadka toddoba kun oo in ka badan seddex boqol oo sano. 
Tani waa soo koobitaanka hadal rahimahullah as-Suyuti, iyo (erayadan) la hadal cad oo ku-al-Aayado ah isku sidoo kale xadiis yihiin kuwo dhab ah; in nolosha dunida lama yaqaan cid marka laga reebo imtithaal. Maxaa yeelay, haddii aan ogahay da'da dunida, sida xaqiiqada ah waxaan ogaan doonaa marka apocalypse. Waxaad u leeyihiin in ay ogaadaan ka hor oo ka mid ah aayaadka al-Quraanka iyo axaadiista Nabiga in xukunka lama yaqaan markii ay dhacday mooyee imtithaal.
Sidoo kale, in xaqiiqda ah in ay jiraan la beenin (ka fekeraan sidii-Suyuti). Tan waxaan ku jirnaa Hijriyyah hore qarnigii shan iyo tobnaad, halka NNKH wuxuu la iman ayaa soo baxay, iyo Nabiga 'Isa ayaa ugu dhaadhacay. As-Suyuti sheegayaa in ay jirto taariikh oranaya NNKH baxay bilowgii qarnigii a iyo 'Isa Alaihissallam hoos, wayna dileen. Aadanuhu Markaasuu wuxuu degganaa dhulka intii afartan sannadood ah, deggan dhulka ka dib markii qorraxdu soo baxdo xagga galbeed boqol iyo labaatan sannadood, oo masaafada u dhaxaysa laba la afuufo (buunka) markuu afartan sannadood jiray, waa in waxan oo dhan ayaa dhici muddo laba boqol oo sannadood [15 gudahood ]. Markaasuu ku salaysan erayada uu ku, haddii NNKH ka soo hadda waa in laba boqol oo sannadood, si ay dhacdo ka mid ah wuxuu Mudan wax ka dib markii uu hal sano kun iyo lix boqol.
By tani waa kebathilah cad xadiiska kasta oo xaddido da'da dunida.
Rahimahullah Ibn al-Qayyim sheegay kitaabkii al-Manaarul waxyaabo qaarkood in isaga loo falsity ee xadiis Muniif. Waxa uu sheegay in, "mid waa qoraalka xadiiska menyelisihi ee al-Aayado-ah adduunka xadiiska cad, sida xayiraad da'da, kaas oo sheegay in nolosha sano oo kaliya toddoba kun oo adduunka ee, intii aannu muddo toddobaad kun oo sano. Tani waa been ugu cad, sababtoo ah haddii ay tani Xadiiska dhab ah, sida xaqiiqada ah qof walba ogyahay maanta in Qiyaamaha dhici doonaa laba boqol iyo kow iyo konton sano of our time. "
Ibn al-Qayyim noolaa qarnigii siddeedaad Hijriyyah, ayuu yiri erayo kale oo kuwan, oo uu joogsadey erayo ka badan lix boqol iyo laba iyo konton sannadood oo uu ku, laakiin dunidu kuma ay ku dhamaatay.
Ibn Kathir waxay yidhaahdeen, "Sida ku qoran buugaagta Israiliyyat (sheekooyin asal ahaan ka soo Ehelu Israa'iil / Yuhuudda-ed.) Oo kuwa ehelu kitaabka ah oo ah qaab muddo xadaynta ayaa la soo dhaafay by kun oo boqolaal sano, oo dhalaalaya si ka badan hal qof HK canaanato -terangan waxaa gudaha, oo iyaga qallafsan ula dhaqmaan sidii ay u qalmaan in ay u heli, iyo sidoo kale waxaa jira xadiis:
"Caalamku waa mid ka mid ah toddobaadka in todobaadyada soo socda."
Xadiiska Tani ma sanadnya dhab ah, mana xadiiska wax ma aha sanad dhab ah oo go'aaminaya waqtiga Maalinta Qiyaame sida ku haboon. 
Sida aan ninna aqoon, marka Maalinta Qiyaame, markaas ninna waxba kama oga marka uu calaamadaha Qiyaamaha soo baxaya. Taariikh in, in sannadkan uu noqon doono sidan oo kale, oo sanadkan ka dhici doona kiiskan, waxa run ma aha, maxaa yeelay, kalandarka ayaa aan weligood lagu samayn markii uu Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii, laakiin Cumar bin al-Khaththablah ayaa lagu wadaa sida ijtihad ku isaga ka go'ay, iyo xisaab bilowday tan iyo bilowgii tahriibka dhacdo Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii in Madiina.
Al-Qurtubi sheegay ", Dhab ahaantii waxa lagu soo waramayaa in ay Nabiga sallallaahu 'Laahu calayhi wa calaa aalihii ah oo ku saabsan cayda iyo dhacdooyinka ka dhaca doonaa, iyadoo waqtiga sano ah la siiyo u baahan tahay sida saxda ah (go'aaminta keshahihan taariikhda) in jabin karo aagaga ay wax gumentasi, waa sida (go'aamiyo) waqtiga Maalinta Qiyaame, ninna waxba kama oga kuwaas oo waxaa dhici doona, midna waa maxay? (The note) in ay dhici doona maalinta jimcaha marka la gaaro dhamaadka waqtiga. Waqtiga in Ilaah u abuuray Adam Alaihissallam, laakiin jimcaha oo ka mid ah? Qofna ma garanayo maalinta saxda ah waxaan Eebe ahayn in ay jirto Wadaagana ma jiro, waayo, isaga, iyo sidoo kale calaamadaha dhibaatada Qiyaamaha, ninna waxba kama oga, wakhtigii waa hubaal, wallahu og. 
[Guuriyeen buugga Asyraathus Saa'ah, qoraaga Abdillah bin Yusuf Yusuf ibn al-wabil, Daar Ibnil Jauzi, Daabacashooyinka Fifth 1415H-1995M, Indonesia Issue Qiyaamaha waa u dhow yahay, Beni Translators Sarbeni, Publishers Reader Ibn Kathir]